कन्चनको लागि छुट्टी पनि नभनी खट्थे दुई महिनाको उपचारवाट पनि कञ्चन निको हुन सकेनन् : डा. प्रदीप – Khabar Patrika Np
कन्चनको लागि छुट्टी पनि नभनी खट्थे दुई महिनाको उपचारवाट पनि कञ्चन निको हुन सकेनन् : डा. प्रदीप
प्रकाशित मिति: सोमबार, फाल्गुण २४, २०७७ समय: २३:५६:१७
दुई महिनाको उपचारवाट पनि कञ्चन निको हुन सकेनन् । आइतवार उनको निधन भएको छ । लामो समय उपचार गराउँदा पनि उनको स्वास्थ्यमा चाहेजस्तो सुधार आउन सकेको थिएन । तर पनि चिकित्सकले उनलाई निकै बचाउने प्रयास गरेका थिए । धेरै दिनको बे होसी अवस्थावाट उनी उनी केही दिन अघि बोल्न सक्ने भएका थिए । तर पछिल्लो समय उनलाई फेरी निमोनिया भएको कारण अवस्था विग्रिएको हो ।
चितवनवाट काठमाडौ पुगेर कञ्चनको आमाको अगाडी विवाह गरेको भोलीपल्टै बेहुलीले आफ्नो माइतीको दवावमा कञ्चनलाई आफुले प्रेम नगरेको बताइदिइन् । उनलाई प्रहरी कार्यालय लगियो । प्रेमिकावाट अलग गराइयो । त्यसपछि उनीहरुको सम्बन्धमा परिवर्तन आयो । त्यो सबै अवस्थाको सामना कञ्चनले सहन सकेनन् । कोठामा फर्किएर वि ष खा ए ।
करिब दुई महिनाको उपचार पछि उनको निधन भयो । आमाले एक्लै हुर्काएको छोरा गुमाउनु परेपछि उनको अवस्था निकै बेहाल भएको छ । जिवनको एक मात्र सहारा ति आमाले गुमाएकी छन् । श्रीमानको सहयोग समेत नपाएकी कञ्चनको आमाले आवजाट एकमात्र सहारा रहेका छोरा पनि गु मा उनु परेको हो ।कन्चनको लागि छुट्टी पनि नभनी खट्थे डा. प्रदीप; यसकारण बचाउन सकिएन ।